Luis de Camoes, zuva rekufa kwake. 4 nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
Guva reLuis de Camoes. Mufananidzo (c) Brian Snelson. Flickr.
Luis de Camoes ndiye mudetembi wenyika yePortugal. Nhasi chitsva Chirangaridzo cherufu rwake en Lisboa en 1580, kwaaigarawo. Rake rinozivikanwa nhetembo basa ndere Iwo maRusiads, asi akanyorawo mitambo mitatu yemitambo. Noupenyu hwakasimba kwazvo pakati pedare, jeri nekufamba, pakupera kwemazuva ake akararama muhurombo uye achirwara. Mukurangarira kwake Ndinoburitsa nhetembo idzi ina.
2.1 Ndiri kuda kuenda amai
2.2 Maziso, wandikuvadza
2.3 Kuona runako rwako, haiwa mudiwa wangu
2.4 Nguva uye zvido zvinoshanduka
Zvinotendwa kuti akaberekerwa mukati Lisboa muna 1524 uye kuti akadzidza paUniversity ye Coimbra. Akatamira kuLisbon muna 1542, kwaaigara achienda kudare ramambo John iii, uko kwaakazivisa hunyanzvi hwake hwenhetembo. Asi aifanira kuenda muhunhapwa nekuda kwechinhu.
Muna 1547 akatanga yake basa remauto uye muna 1550 akadzokera kuLisbon, kwaakavezve nematambudziko uye akaiswa mutirongo Kurwa mumugwagwa. Mushure mekusiya makore matatu gare gare, akabva aenda India, akapukunyuka ngarava ndokudzokera kuLisbon muna 1570.
Dingindira guru renhetembo yake ndiyo kunetsana pakati peshungu uye rudo rwepanyama uye yakanaka yePlato zverudo rwemweya. Vhura Iwo maRusiads, rake rakakurumbira basa, akarumbidza zviitwa zvevanakomana ve Lusus, maPutukezi, asi zvakaratidzawo kuvava pamusoro pehutsinye hwakanyanya hwePortugal colonialism. Zvimwe chete kusava netariro rinoramba riri munziyo dzaro. Aive zvakare munyori we comedies nhatu: Mutevedzeri, Mambo Seleucus y Firodhimo.
Ndiri kuda kuenda amai
Ndinoda kuenda, amai,
kune iyo ngarava,
Amai, kana ndikaenda,
kuti Rudo anochida.
Mwana ane hasha iyeye
zvinoita kuti ndife
Iye anogona kuita chero chinhu
Zvakanaka mweya unoenda
rega muviri ugare.
Ndiri kuenda, nekuti handife:
kuti kana ari mufambisi wengarava,
Iwo mutemo unodzvinyirira
Zvakanaka nenzira iyi
Ndinoda kuenda, ndinoda,
Iti mafungu, riini
kuva munyoro uye akanaka,
Asi izvo zvisingatarisirwe
da iye mwana ane hasha?
zvimwe, wakafa, tarisa kwandiri zvakare,
Zvakanaka, wakandipa chironda chakadai
kufa inhanho yakanaka kwandiri,
Zvakanaka, nekufa unondipa hupenyu.
Pedza kundiuraya manje;
Ronda, kurudyi, ratove rangu,
kunyange, maziso, iwe usingade;
asi kana ukandiuraya,
kufa mufaro kwandiri.
Saka ndinoti pedza,
o maziso, atondiuraya;
Kuona runako rwako, haiwa mudiwa wangu
Kuona runako rwako, haiwa mudiwa wangu,
kubva pameso angu chikafu chinotapira,
pfungwa dzangu dzakakwirira kudaro
Ini ndave kutoziva denga mumweya mako.
Uye zvakanyanya ivhu ndakarasika
kuti handifungidzi chinhu mukuterera kwako,
uye kunyura mukufungisisa kushamisika kwako
Ini ndakanyarara, zvangu zvakanaka, uye ndiri delirious.
Kutitarisa, Mukadzi, ndinovhiringidzika,
kune wese munhu anofungisisa chiperengo chako
taura haugone nyasha dzako dzakanaka.
Nekuti nyika inoona runako rwakawanda mauri
kuti hazvimushamise kuona iye akasika iwe
Ndiye munyori wedenga nenyeredzi.
Nguva uye zvido zvinoshanduka
Nguva uye zvido zvinoshanduka;
Kuva shanduko, kuvimba kunochinja;
nyika yakaumbwa nekufamba
nguva dzose kutora hutsva hunhu.
Tinoramba tichitarisa nhau
akasiyana pane zvese kutarisira;
kubva pane zvakaipa kunoramba kuri chirango muhunhengo;
uye yeakanaka, kana paine, saudades
Iyo nguva inoshanduka yekuvhara nejasi girini
mupata maipenya chando.
rwiyo irworwo rwunova kuchema mandiri.
Uye, kunze kwekuchinja uku kwezuva rega rega,
kufamba, kune imwezve yekutya kukuru:
kuti haachafambi zvekare sezvaaimboita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Luis de Camoes, zuva rekufa kwake. 4 nhetembo
Allende, Espinosa, Asensi, Villar, Moccia ... 8 vatengesi vakanyanya vemwedzi iyi